Aqoonyahan Khadar Tifow oo kamid noqday Golaha Wasiirada Maamulka Hirshabelle | Gaaloos.com
Home » News » Aqoonyahan Khadar Tifow oo kamid noqday Golaha Wasiirada Maamulka Hirshabelle
Aqoonyahan Khadar Tifow oo kamid noqday Golaha Wasiirada Maamulka Hirshabelle
Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Cosoble ayaa shalay magaalada Jowhar kaga dhawaaqay golaha Wasiirada maamulkisa, waxaana Wasiirada la magacaabay kasoo dhax muuqday dhalinyaro aqoonyahano ah oo qaarkood dalka dibadiisa ka yimid.
Wasiirada uu magacaabay Madaxweynaha Hirshabelle waxaa kamid noqday Xildhibaan Khadar Xasan Maxamed (Tifow) oo loo magacaabay in uu noqdo Wasiirka Arimaha dastuurka iyo Federaalka ee maamulka Hirshabelle.
Khadar Tifow oo horey uga mid ahaa Xildhibaanada maamulka Hirshabelle ayaa mar kale kamid noqday golaha Wasiirada maamulkaasi, waxa uuna Khadar kamid yahay aqoonyahanada Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabtay si ay wax u taraan dadkooda iyo dalkooda.
Wasiirka Cusub ee Dastuurka iyo Arimaha Federaalka Hirshabelle Khadar Xasan Maxamed ayaa kamid ahaa dhalinyarada kunooleed waxna kusoo bartay dalka Ingiriiska, waxa uuna Khadar go'aansaday in uu kusoo laabto dalkiisa si uu wax ugu qabto dadka Soomaaliyed.
Khadar Xasan Maxamed ayaa sidoo kale kamid ahaa Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal ee soo dhisay Baarlamaanka labada Aqal ee lagu doortay gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan xarumaha maamul goboleedyada dalka.
Dadka yaqaan Khadar Xasan Maxamed ayaa sheegay in uu yahay aqoonyahan khibrad u leh shaqada hada loo igmaday, waxa ayna tilmaameen in kalsooni badan ku qabaan in uu kasoo baxo waajibaadka loo igmaday .
Wasiir Khadar Xasan Maxamed ayaa kasoo jeeda gobolka Shabeelaha Dhaxe gaar ahaan Degmada Balcad, waxa uuna kamid yahay xubnaha ugu fir fircoon Wasiirada uu shalay magacaabay Madaxweynaha maamulka Hirshabelle.
Title: Aqoonyahan Khadar Tifow oo kamid noqday Golaha Wasiirada Maamulka Hirshabelle